Mutambi weOlimpiki uye wepasi rose we3000 m steeplechase, Conseslus Kipruto akaedzwa ane hutachiwona hwecoronavirus - teles relay
Mutambi weOlimpiki uye wepasi rose we3000 m steeplechase, Conseslus Kipruto akaedzwa ane hutachiwona hwecoronavirus.
By bryamangwanabe On Nyamavhuvhu 9, 2020
Makwikwi eOlimpiki uye epasi rose 3000m anokwikwidza mimhanzi Conseslus Kipruto acharasikirwa kekutanga chiitiko cheDiam League mumwaka uno muMonaco mushure mekuyedza kurongeka kweiyo coronavirus.
Kipruto, makumi maviri nemasere, aive mumwe wevatambi gumi nevaviri vekuKenya vakabvumidzwa kukwikwidza musi waNyamavhuvhu 25 mushure mekunge hurumende yeFrance yabvisa chikumbiro chavo che visa.
Asi akazivisa kuti akange akundikana bvunzo yeCovid-19 protocol nemugovera.
"Ini handina kana zviratidzo uye ndanga ndiri muchimiro chakanaka," anodaro.
"Ndakafunga kutora nhoroondo yenyika - yanga iri kunze kweKenya kwenguva yakareba." "
Kipruto akakunda goridhe kuRio 2016 Olimpiki uye akakunda kumashure-kusvika-kumashure mazita epasi rose muLondon muna 2017 naDoha gore rakapera.
Ane akanakisa pachayo kwemaminitsi masere 00,12 masekondi, aine mutsi weKenya anobva kuQatar Saif Saaeed Shaheen akabata rekodhi yenyika yanhasi ye7: 53,63.
"Ndinoda kutenda Monaco nebasa rose ravakaita uye ndinoshuvira ivo pamwe nevamwe vangu makwikwi akanaka," akawedzera Kipruto.
"Track uye munda zvadzoka uye ini ndinodzoka futi." "
Kutevera zviitiko zvekuratidzira muOslo uye Zurich munaJune naChikunguru, Monaco ichaisa kutanga kwemwaka wemakwikwi.
Zvimwe zviitiko zvitanhatu, kusanganisira chiitiko chemumugwagwa muLausanne, chiri kurongwa gore rino, mushure memisangano muEugene, London, Paris, Rabat, Gateshead neShanghai zvese zvakabviswa nekuda kwekoronavirus.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/sport/athletics/53708008
Conseslus Kipruto akaedzwa kuti aone coronavirusMakwikwi eOlympic uye epasirese mu 3000 m steeplechase
Suspect 'anobvuma kuuraya' muEthiopian pop star Hachalu Hundesa